Izinzuzo nobubi baphansi kwamapulangwe | Bezzia
Izinzuzo nobubi baphansi kwamapulangwe
UPau Heidemeyer | | Ikhaya
Ukukhetha ifulethi lendlu kuyinto ebaluleke kakhulu, ngoba ukukhetha kwethu kuzoba kubalulekile emsebenzini olandelayo ongasinikezwa yiphansi. Ngaleyo ndlela, uma ukhethe indawo yokhuni, ke Sikutshela ukuthi yiziphi izinzuzo nobubi bezitezi zokhuni.
Iphansi lamapulangwe kungenye indlela abavikeli nabaphikisi abangahle babe nayo, kusukela ngaphezu kobuhle nesigaba esinikeza izikhala, kukhona uchungechunge lwezinto eziphikisanayo ezihambisana nokunakekelwa ngokweqile okudingayo.
Uma uthathe isinqumo sokufaka iflathi yokhuni endlini yakho, kuzodingeka ukuthi ube nezici ezithile ezifana nemvelo, ubuhle, ukufakwa, ukugcinwa, ukumelana nokuthi yiziphi izindleko zokubeka ifulethi lokhuni ekhaya lakho. Ukukhethwa kwezinkuni kufanele kuvunyelwane nenqubo ethile, hhayi ngoba kubukeka kukuhle.
1 Lezi yizinzuzo zaphansi kwamapulangwe
1.1 Kuyinto yokwakheka okuhle okushisayo
1.2 Kuyinto ehlala isikhathi eside kakhulu
1.3 Kuyinto inhlabathi hypoallergenic
1.4 Ukuhlanzeka komoya
1.5 Ngobuhle buhle kakhulu
2 Ububi bezitezi zokhuni
2.1 Ukufakwa kwezitezi zokhuni
2.2 Ukugcinwa okuningiliziwe
2.3 Ingashintsha umbala ngokuhamba kwesikhathi
2.4 Intengo yezinkuni
2.5 Izinkuni zenza umsindo
3 Cabanga ngokucophelela ukuthi uluhlobo luni lwesitezi sokhuni osifunayo ekhaya lakho
Lezi yizinzuzo zaphansi kwamapulangwe
Izinkuni ziyinto eheha ukunakwa okuningi, iyinto enhle kakhulu nenhle, isivumela ukuthi sibe nemibala eminingi yokhuni futhi ivumelanisa nazo zonke izinhlobo zezindlu. Ingahlanganiswa nefenisha futhi inganikezwa isisindo esikhulu endlini. Noma kunjalo, ukhuni lunezinye izinzuzo eziningi esizobona ngezansi:
Kuyinto yokwakheka okuhle okushisayo
Uma ufuna ukuba nendlu evinjelwe kahle, ungakhetha ukuba nendawo yokhuni. Uma sisezikhathini ezibandayo, ifulethi lamapulangwe linendawo evumayo, ngoba ine-coefficient ephezulu yokufaka ukushisa. Ngale ndlela, phansi kugcina imfudumalo ekhaya, yize amazinga okushisa aphansi etholakala ngaphandle.
Kuyinto ehlala isikhathi eside kakhulu
Izinkuni zinempilo ende ende esebenzisekayo, lapho zinakekelwa futhi zithola ukwelashwa okuhle kakhulu, zingagcinwa zingashintshi iminyaka neminyaka.. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu besitezi sokhuni bubalulekile kulokhu kulungiswa ukuze kuhlale isikhathi eside.
Kuyinto inhlabathi hypoallergenic
Uma uthatha isinqumo sokubeka i-flooring yokhuni ekhaya lakho, khumbula ukuthi uzogcina ukungezwani komzimba nakho ngoba akuvamisile ukuthi kube nothuli oluningi njengezinye izitezi. Impova noma izinto ezahlukahlukene ezivame ukuba imbangela yokungezwani komzimba okungathandeki aziminywa kahle phansi.
Izinkuni zihlanzwa kahle kakhulu futhi lezi zinto zangaphandle zizophuma.
Izinga lomoya ezindlini ezinamaphansi okhuni liyakhula ngendlela ephawulekayo, okwenzayo lokhu ukuthi umuntu ohlala endlini enezitezi zokhuni, uyakwazi ukuba nempilo esezingeni eliphakeme.
Ngobuhle buhle kakhulu
Iphansi lamapulangwe liyinto ehlukanisayo, noma iyiphi indlu enezitezi zokhuni iphelele ukuba nesimo sezulu esifudumele kakhulu nenhle. Ngokuhleleka bayi- kumele okumele ube nayo. Zonke izitezi zokhuni zisiza ukuthuthukisa ifenisha nazo zonke izinto ezikhona kuyo.
Izingodo thola imibala ehlukahlukene kakhulu futhi uqede ekahle evumelana nazo zonke izindlu.
Ububi bezitezi zokhuni
Akuyona yonke into eyigolide ecwebezelayo, yize kunezinzuzo eziningi, izitezi zokhuni nazo zinokubi okuthile okufanele ukwazi. Ngemuva kwalokho, Siyakutshela ukuthi yimaphi lawa maphuzu okumele uwacabangele:
Ukufakwa kwezitezi zokhuni
Lapho ufaka ifulethi lokhuni, kufanele kulandelwe izinyathelo ezimbalwa ngendlela eyi-millimeter, ngoba iphutha lingenza ukuthi ukhuni lungalingani, ngaphezu kwalokho, kungadala ubude besitezi sokhuni eminyakeni edlule.
Ngalesi sizathu, kungcono ukuya kochwepheshe emkhakheni ukuze baqinisekise ukuphela okuhle kakhulu.
Ukwelashwa okufanele kutholwe phansi ngokhuni kukhulu kakhulu kunezinye izinto zokwakha. Ngoba izinkuni ziyabonakala ethintwa umswakama, ilanga eleqile kanye nokuklwebheka oxhumana nakho nezinye izinto. Ngakho-ke, kudinga isikhathi esithe xaxa ukuyinakekela.
Ingashintsha umbala ngokuhamba kwesikhathi
Izinkuni ngokuhamba kwesikhathi zingashintsha umbala, lokhu kwenzeka lapho enye indawo ivezwe kakhulu elangeni kunenye, ngakho-ke kwenziwa ukukhubazeka okubanga lokho ushintsho ku-aesthetics oyifunayo endlini.
Intengo yezitezi zamapulangwe iyimikhawulo emikhulu uma uzikhetha, ngoba inani elijwayelekile lidlula ezinye izinketho ezitholakala emakethe. Kunezimfanelo eziningana esingakhetha kuzoNgakho-ke, ungahlala uthola okuvumelana nezimali zomndeni wakho.
Yize ekuqaleni uyibona njengezindleko eziphezulu kakhulu, khumbula ukuthi izofana nokutshalwa kwemali kwesikhathi eside.
Izinkuni zenza umsindo
Izinkuni azinawo amanani we-acoustic insulation amahle kakhulu, umsindo uvame ukusabalala ngokungafuneki phezu kobuso bonke. Ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki, ungqimba olwengeziwe lungasetshenziswa ukuze lusebenze njenge-insulator., noma ngabe sinquma kanjalo, kuzokwenyuswa ngentengo yokugcina.
Cabanga ngokucophelela ukuthi uluhlobo luni lwesitezi sokhuni osifunayo ekhaya lakho
Iphansi lamapulangwe liyindlela enhle kakhulu kubantu abazimisele ukwenza imali enkulu, isondlo kufanele senziwe ngezikhathi ezibekiwe, futhi, Kumele ibe nokunakekelwa okudingekayo ukuze kungathinteki umswakama noma ukungena kwelanga.
Lapho usuzazi izinzuzo nobubi bokuba nendawo yokhuni ekhaya lakho, Kufanele wazi ukuthi isinyathelo esilandelayo ukwenza ucwaningo ukulinganisa ukuthi kungenzeka yini ngokusho kokuvezwa okuzoba nakho.
Ukukhetha noma cha phansi kokhuni kufanele kuxhunywe ochungechungeni lwezimpawu zento uqobo, kanye nobuhle nobubi, ngaphezu kwalokho, kumele sicacelwe ukuthi zingabanjani lezo zinkuni ekhaya lethu nokuthi yiziphi izinhlobo zefenisha ezizohambisana nabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Izinzuzo nobubi baphansi kwamapulangwe
Amafilimu azokhishwa kumatiyetha ngoMeyi olandelayo
Amagxolo kaFrangula, asetshenziselwa ini?